I-honeymoon kwixesha ngalinye lonyaka | Iindaba Zokuhamba
I-honeymoon kuwo onke amaxesha onyaka
Maria | | Ezothando, Uhambo
I-Honeymoon lolu hambo olwahlukileyo nolungaphindwayo oluya kwenziwa ngaba batshatayo emva komtshato kwindawo ekhethekileyo apho banokuzonwabisa ngeparadesi yokwenyani eMhlabeni iintsuku ezimbalwa. Ngokwesiqhelo umtshakazi nomyeni bakhetha ukwenza olu hambo kwimozulu entle emva komtshato, ubukhulu becala eyenzeka phakathi kukaMeyi no-Okthobha.
Indawo ekuyiwa kuyo ikhethiweyo kwiholide yasemva komtshato ayinakubekelwa kuphela ukuthanda izinto kwesi sibini. Ukuthintela ukumangaliswa kwemozulu (iimvula okanye ixesha leemvula kunye nengqele yasebusika emazantsi e-hemisphere), umtshakazi nomyeni kufuneka bakhethe indawo abaya kuyo kuthathelwa ingqalelo umhla womtshato, kuba i-adventure ihlala iqala emva kweentsuku ezimbalwa.
Ukuba untywiliselwe kumalungiselelo omtshato wakho kwaye ujonge ulwazi lokucwangcisa i-honeymoon yakho, sicebisa ukuba ufunde esi sithuba silandelayo njengoko siza kuthetha ngeendawo ezifanelekileyo ixesha ngalinye lonyaka.
1 Ihlobo: I-Indonesia, i-Oceania kunye ne-Afrika
2 Ekwindla: eVietnam naseIndiya
3 Ubusika: Latin America, Maldives naseKenya
4 Ntlakohlaza: eJapan
Ihlobo: I-Indonesia, i-Oceania kunye ne-Afrika
Uninzi lwezibini zihamba esibingelelweni kwiinyanga ezishushu zonyaka, ke amazwe anje IBotswana, i-Indonesia, iMozambiki, iAustralia, iTanzania, iFixed, iSamoa kunye nePolynesia zezona ndawo ziphambili ukusukela ngoJuni ukuya ku-Okthobha ngenxa yamaqondo obushushu aphakathi kunye nokungabikho kwemvula.
Umzekelo, iziqithi zoLwandle lwaseMzantsi kunye neIndonesia basebusika babo ngenxa yoko akushushu ngokugqithisileyo kwaye akukho mvula. Kwakhona lixesha elifanelekileyo lokuhamba nge-safari e-Afrika. Kwezi nyanga akana mvula kumazwe afana neMozambiki, iBotswana okanye iTanzania kwaye ukungabikho kwemvula kwenza ukuba izilwanyana zasendle zigxile kwiindawo ezinamanzi asisigxina kwaye kubelula ukucinga ngazo. Okokugqibela, iziQithi zeFiji zikwixesha elomileyo ngoko ke imozulu intle kwaye akukho mngcipheko umncinci weenkanyamba kunye nemvula. Ukongeza, yiparadesi enamanzi acwecwe ngekristale kunye nesanti emhlophe.
Ekwindla: eVietnam naseIndiya
Kuba i-India lilizwe elikhulu, akukho xesha lilungileyo lokundwendwela umhlaba wayo wonke, kodwa singatsho ukuba ngasekupheleni kokwindla imvula iphelile kwaye amaqondo obushushu amnandi ngakumbi. Yenye yeendawo zokucela ukuba undwendwele ngexesha lasemva komtshato kumlingo wamabhotwe akhe, umahluko phakathi kweenkcubeko, isityebi sayo sokutya kunye nobuhle beendawo zayo.
Ngokwenxalenye yayo, ixesha elilungileyo lokwazi iVietnam liqala ekuqaleni kokwindla kude kube ngu-Epreli. Ilizwe elinomtsalane eliqaqambisa ilifa lalo lendalo elibanzi, i-gastronomy yayo yodidi lokuqala kunye nezithethe zayo ezendeleyo.
Ubusika: Latin America, Maldives naseKenya
Elona xesha lilungileyo lokonwabela iziqithi zeMaldives kubusika, ngakumbi ukusuka kuDisemba ukuya kuMeyi. Iidigri zayo eziqhelekileyo ezingama-28 kunye namabhishi alo amaphupha enza eli lizwe libe yindawo efanelekileyo yokuphumla nokonwabela ilanga emva komtshato.
Ukufumana izibini ezithandekayo, iindawo ezintathu ezinomdla kakhulu zinokuba yiKenya, iChile neCosta Rica. Eli lizwe laseAfrika yindawo elungileyo kwabo bakhethe ubusika ukuba batshate kunye nomazibuthe oyinyani kwabo bafuna indibaniselwano ye-exoticism kunye nokuzonwabisa kwiholide yabo. Eminye yemisebenzi engenakulibaleka enokuthi yenziwe apha kukuhlala kwenye yeekhabhathi zaseSwahili kwisiQithi saseLamu, ukuphonononga iintlambo namahlathi asendle, ukulala phantsi kweenkwenkwezi kwikhabhathi ebekwe emthini okanye ukuya kuhambo lokujonga indalo. iingcwele zelizwe.
Ngokwalo icala, iChile lilizwe elinomtsalane apho abo batshatayo baya kufumana ubume obuhluke kakhulu phakathi kweentaba ezintle zeAndes, umkhenkce osemazantsi kunye nentlango esemantla. Ezinye zeendawo ezinomtsalane zokundwendwela ngexesha lasemva komtshato eChile yintlango yaseAtacama, iSiqithi sePasika, iViña del Mar, iPuerto Varas okanye ikomkhulu iSantiago de Chile.
NgoJanuwari ukuya kuJuni ikwalixesha elifanelekileyo lokufumana iCosta Rica, elona lizwe likhuselekileyo kuMbindi Merika. Ixesha lonyaka elomileyo lelona lihambahamba kuyo yonke imimandla yalo kwaye likhohliswe ngamanxweme alo kunye namahlathi alo angaqhelekanga.
Ubutyebi bendalo baseCosta Rica yenye yezinto ezinomtsalane kubathandi bendalo. Ukuhlanjwa ngamanzi ashushu nacocekileyo oLwandle lweCaribbean empuma kunye noLwandlekazi lwePasifiki ngasentshona, ilizwe lizele ziindawo ezintle lokonwabela indalo ngendlela yalo emsulwa.
Ukusukela ngo-Matshi ukuya ngoMeyi kwaye ngakumbi u-Epreli lixesha elimnandi lokwazi iJapan njengoko imithi yetsheri iqala ukudubula kwaye ilizwe liba ngumyezo omangalisayo. Ithuba elikhethekileyo lokutyelela iigadi ezintle zaseAsia okanye uphumle kwimithombo yalo eshushu.
Kuba iJapan ayilolizwe likhulu kakhulu, kulula ukudibanisa usuku lokuthenga kunye nokutyelela ezixekweni ukuze uzidakise kwindawo ephithizelayo kunye nokuzonwabisa kwiidolophu ezinkulu zaseJapan ngemini yokundwendwela nokutyelela kwiipaka zayo zendalo nakwiindawo ezisemaphandleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Indawo yokubaleka » Ezothando » I-honeymoon kuwo onke amaxesha onyaka
Uhambo oluya kwiNtaba iTakao, indawo ekuyiwa kuyo nge-panoramic eTokyo
Ukutyelela imiqolomba emnandi kwihlabathi liphela